Vita ny fifamindram-pahefana : horaisina mpanakanto ny minisiteran’ny Kolontsaina | NewsMada
Vita ny fifamindram-pahefana : horaisina mpanakanto ny minisiteran’ny Kolontsaina
Nesorina tamin’ny maha minisitra azy, ka notendrena ho loholona Rasamoelina Brigitte. Notendrena hampandeha ny raharaha ao amin’ny minisiteran’ny Kolontsaina sy ny vakoka kosa ny minisitra Andriamosarisoa Jean-Anicet, izay mpanakanto ihany koa.
Tontosa, omaly, tetsy amin’ny Tranombokim-pirenena Anosy ny fifamindram-pahefana teo amin-dRasamoelina Brigitte, minisitry ny Kolontsaina sy ny asa tanana, sy Andriamosarisoa Jean-Anicet, minisitry ny fanatanjahantena. Voatendry ho loholona iry voalohany, ka hanohy ny asany mandritra ny fotoana voafetra kosa ity faharoa.
“Hanohy sy hanatsara ny ezaka efa naroso aho, fa tsy manana tetikasa vaovao akory, satria voafetra ihany ny handraisako ny fitantanana ity minisitera ity”, hoy ny nambaran’ny minisitra Andriamosarisoa Jean Anicet. Na izany aza, fantatra fa mahalala betsaka momba ny kolontsaina, na amin’ny maha mpanakanto azy fotsiny aza ny minisitra vaovao.
“Faly izahay mandray ny minisitra vaovao, izay inoanay fa mahafantatra ny olanay bebe kokoa”, hoy ny filazan’i Samoëla, mpanakanto sady filohan’ny filankevi-pitantanan’ny Omda.
Herintaona teo ho eo no nitantanan’ny minisitra Rasamoelina Brigitte ny Kolontsaina sy ny asa tanana. Nanao jery todika ireo zava-bitany, izay nambarany fa maromaro ihany, tsy araka ny fanenjehana mianjady aminy izany. “Sarotsarotra ny fifandraisana teo amin’ireo mpitantana sy ny mpiasa rehetra tany am-boalohany, saingy nihatsara izany taty aoriana”, hoy ny nambarany. Nitanisa ireo zava-bita, toy ny famatsiam-bola avy amin’ny japoney, nentina nanaovana atrikasa sy fiofanana ary fananganana ireo vakoka ao Manjakamiadana izy. Teo koa ny fanavaozana ny lapan’Andafiavaratra, sns. Tetikasa tsara, saingy tsy mbola manomboka na eo an-dalam-panatontosana kosa no tena maro nitanisainy. Anisan’ireny ny fananganana ny volavolan-dalana momba ny sarimihetsika, ny fanavaozana ireo mozea maromaro, sns.
Tsy fantatra izay tena handray ny minisiteran’ny Kolontsaina, aorian’ny fanovana ny governemanta. Mandra-pahatonga izany aloha, manantena amin’ny minisitra mpiahy vaovao ny fianakaviamben’ny minisitera sy ireo rehetra voakasik’izany. Hatramin’izay mantsy, faralahin-javatra foana ity departemanta ity…